Blood Donation – AYA Bank
အလှူအတန်းဆိုတာ ပိုက်ဆံချမ်းသာမှမဟုတ်ပါဘူး . . .
ကျွန်ုပ်တို့မှာ ငွေကြေးထက်ပိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ လှူနိုင်တဲ့ အရာတွေ ရှိပါတယ် . . .
ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စီးဆင်းနေတဲ့သွေးဟာ လိုအပ်နေတဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး။
သွေးလှူဒါန်းခြင်းဟာ မွန်မြတ်တဲ့အလှူဒါနဖြစ်သလို ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်။
၁။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှု လျော့ချခြင်း။
၂။ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချမှုကို အထောက်ကူဖြစ်စေခြင်း။
၃။ သွေးအားပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးခြင်း။
၄။ သွေးတွင်း ကောလက်စတောများ လျော့ချပေးခြင်း။
၅။ သွေးနီဆဲလ် ထုတ်လုပ်မှုကို မြင့်တင်ပေးခြင်း။
၆။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် နုပျိုလန်းဆန်းစေခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။
ယခုနှစ် သွေးလှူဒါန်းခြင်း အစီအစဉ်ကိုတော့ ဩဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီဘဏ် တည်ထောင်မှု (၉) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဧရာဝတီဘဏ်ဝန်ထမ်းများက သဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာဖြင့် ဝိုင်းဝန်းစုပေါင်းလှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။
မွန်မြတ်သော အလှူဒါနဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြသော ဧရာဝတီဘဏ်ဝန်ထမ်းဦးရေ စုစုပေါင်း (၂၇၁) ယောက်ကို ပြန်လည်အားပြည့်စေရန်အတွက် လိုအပ်သောအားပြည့်စာများဖြင့်လည်း အလှူဒါနပြုခဲ့ကြပါတယ်။ 100 Plus Myanmar မှလည်း အချိုရည်ဖြင့် ပါဝင်ဒါနပြုခဲ့ကြပါတယ်။
← ဧရာဝတီဘဏ်ရုံးချုပ် ROWE နှင့် Riverview တို့တွင် ဝန်ထမ်းများမှလည်း လစဉ်လတိုင်းတွင် တစ်လ တစ်ရက် အားလုံးအတူ စုပေါင်းကာ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
Memorable of AYA bank’s 9th Anniversary →